Ithegi: irekhodi le-spf ezininzi
Imimandla eliqela kwiRekhodi ye-SPF yakho
NgoMvulo, nge-14 kaJanuwari, 2013 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, 2015 Douglas Karr
Siyiqinisile incwadana yethu yeveki (qiniseka ukuba ubhalisile!) Kwaye ndiye ndaphawula ukuba amaxabiso ethu avulekileyo kunye nokucofa amanqanaba asezantsi kakhulu. Amathuba kukuba uninzi lwezo imeyile azizenzi kwibhokisi engenayo konke konke. Inye into ephambili kukuba sinerekhodi ye-SPF-irekhodi yokubhaliweyo ye-DNS-engakhange ibonakalise ukuba umboneleli ngenkonzo we-imeyile wayengomnye wabathumeli. Ababoneleli ngeenkonzo ze-Intanethi basebenzisa le rekhodi ukuya
Kwiveki ephelileyo ndimise iMcSkillet burrito endleleni eya emsebenzini. Ndingabhala iposti nje ngendlela endizithanda ngayo ezo kunye ne-Qdoba burritos yesidlo sakusasa, kodwa ndiza kukusindisa. Ngelixa bendiseMcDonalds, umdla wam wokufuna ukwazi wandifumana ndayalela iMcCafe Mocha kunokuma kwivenkile endiyithandayo. Imibala, imiqondiso ephucukileyo kunye nokupakishwa ngeetoni zomhlaba zikujikelezile kwaye zikwenza uzive ngathi